Carruurta Dandwaag oo si fiiican ugu ciiday Leas-leakland Borås – danwadaagforening.se
Home 2015 September 28 Carruurta Dandwaag oo si fiiican ugu ciiday Leas-leakland Borås
Jaaliyadda Danwaadag waxa ay caruurta ka diiwaan gashan geysey Leas lekland Borås oo ah meel si fiican loo diyaariyey in ay caruurta ku ciyaaraan. Shalay oo tariikhdu aheyd 27/9 2015 ayey caruurta Danwaadag u aheyd maalin ay aad iyo aad weyn oo aan la ilaabi karinmaadaama fursad loo siiyey in ay si wadajir ah ugu cayaaraan oo ay ku ciideystaan iskuna bartaan. Waxaa meesha lageeyey caruur gaareysa 32 oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
Saacadda meesha la geeyey waxa ay aheyd 10:ooka subaxnimo ilaa 19.00 waxa ayna soo ciyaareen saacado badan. Waxaa xusid mudan in aan carruurta dareemin wax daal ah saacado badan ka dib oo ay weli rabeen in ay sii wataa ciyaartooda. Carruurta waxaa meesha ku wehlinaayey waalidiintooda oo maalintii oo dhan la taagnaa.
Jaaliyadda waxaa ka go’an in ay wadaan howlaha loogu farxinaayo carruurta gaar-ahaan xilliyadaha munaasabadaha ay jiraan sida CIIDAHA, si ay carruurta u dareemaan ahmiyada maalmaha CIIDAHA. Haddaba hadii aad daneyneysid in carruurta ka mid noqdaan kuwa la geeyo meelaha ay ka mid yihiin Leos-lekland lasoo xiriir Guddiga jaaliyadda si ay uga mid noqdaan mustaqbalka dhow.
Maamulka Jaaliyadda waxa uu u mahad-celinayaa dhamaan intii ka qeyb qaatay in ay hawshan hirgasho gaar-ahaan waalidiinta iyo qeybaha kala duwan ee Guddiga Jaalliyada.
Hoos ka daawo sawirada caruurta iyo walidiintooda oo wada cayaaraya……